2021 Ugari hweAntigua neBarbuda
Izvo zvinokwanisika kunyorera kuve mugari weAntigua neBarbuda pasi pechirongwa chekuva mugari nekudyara muzvivakwa, bhizinesi kana muhomwe yenyika yekusimudzira
kuva vagari venyika mbiri;
hapana chikonzero chekugara zvakananga;
hapana mutero maererano nemari inowanikwa pasi rose;
pekugara - mazuva mashanu chete, kwemakore mashanu;
hapana zvinodiwa zvedzidzo, manejimendi ruzivo;
kuwana mukana wekushanyira nyika dzinopfuura zana nemakumi mashanu, kusanganisira Hong Kong, Great Britain, pamwe neidzo dzinowanikwa munzvimbo yeSchengen;
risiti mukati menguva isingasviki mwedzi mitatu, kusanganisira vana vadiki, pamwe nevana vari pasi pemakore makumi maviri nemashanu;
kunyoreswa kwekuva mugari wevabereki vari pasi pemakore makumi matanhatu nematanhatu vanogara neakananga kunyorera;
inokwanisika kugashira magwaro epamutemo, mukati menguva isingadariki mazuva makumi matanhatu kubva pazuva rekudyara;
nharaunda yakanakira kugara zvachose.
Maitiro ekuwana ugari hweantigua neBarbuda:
US $ 100 - akananga kunyorera pamwe nevanhu vatatu vari mukutarisirwa,
Muhuwandu hweUS $ 125 - akananga kunyorera pamwe nevanhu vana vari mukutarisirwa.
2. Nekudyara mari muhurumende-yakasimbiswa real estate:
Mukati megadziriro yechirongwa chiri kutariswa, mutengo weiyo yakawanikwa real estate inofanirwa kunge ingangoita zviuru mazana mana emadhora ekuUS muzvirongwa zvakatenderwa. Iyo ficha inofanirwa kunge iine yavo kweanenge makore mashanu. Kunyoreswa kwemusoro wepfuma, mari yekunyoresa uye kubhadhara mutero kunobhadharwa pamusoro pemutengo wekuwana chivakwa chacho.
3. Sangano rezvemabhizimusi
Iye anenge achinyorera anofanira kuita mari yemamirioni 1 zviuru mazana mashanu emadhora ekuAmerica kuitira kuti atange bhizinesi uye awane ugari hweAntigua neBarbuda. Zvakare, mari dzekudyara dzinogona kuve pamwe chete. Panyaya iyi, hushoma pamukwikwidzi mumwe nemumwe iUS $ 500, hushoma huwandu iUS $ 400 miriyoni.
US $ 25 - kusvika kune vanonyorera;
US $ 15 - mumwe nemumwe anotevera kunyorera.
Mari dzekusimbiswa kwekubatanidzwa mukupara mhosva:
US $ 7 - akananga kunyorera;
US $ 4 - munhu ane hanya ari pakati pemakore gumi nemasere kusvika makumi maviri nemashanu;
US $ 2 - munhu ane hanya kubva pamakore gumi nemaviri kusvika gumi nemasere.